Ahoana ny fakana tahaka sy hametahana amin'ny iPhone: Izay rehetra tokony ho fantatrao! - Iphone
iPhone mamerina hatrany hatrany
iphone size size be loatra
famantaranandro paoma fiainana 3
inona no dikan'ilay isa dimy?
ny fomba fanidiana ny pejy misokatra amin'ny iphone
Ahoana ny fakana tahaka sy hametahana amin'ny iPhone: Izay rehetra tokony ho fantatrao!
Te handika sy hametaka hafatra an-tsoratra lava ianao na hizara adiresy tranokala haingana amin'ny namanao, saingy tsy azonao antoka ny fomba. Ny fandikana sy ny fametahana dia iray amin'ireo hitsin-dàlana malaza indrindra sy manampy amin'ny solosaina rehetra, saingy maro ny olona tsy mahalala ny fomba anaovany azy amin'ny iPhone. Haneho anao ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana kopia sy fametahana amin'ny iPhone amin'izay ianao afaka mitsitsy fotoana rehefa manoratra!
Inona no azoko adika sy apetaka amin'ny iPhone?
Azonao atao ny mandika lahatsoratra, adiresy tranokala (URL), hafatra an-tsoratra azonao amin'ny app Messages, ary maro hafa amin'ny iPhone. Na inona na inona fanapahan-kevitrao alain-tahaka dia azo apetaka amin'ny fampiharana rehetra ampiasana ny kitendry iPhone, toy ny fampiharana Messages, app Notes, ary ireo fampiharana haino aman-jery sosialy tianao indrindra. Hatoronay anao ny fomba handika sy hametahana lahatsoratra, URL ary hafatra an-tsoratra mba hahafahanao ho tonga manam-pahaizana!
ipad diso teny miafina ho an'ny wifi
Ahoana ny fomba handika sy hametahana amin'ny iPhone
Alohan'ny ahafahanao maka tahaka na inona na inona amin'ny iPhone dia mila aloha ianao mifidy izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila miteny amin'ny iPhone-nao ianao hoe: 'Ity no lahatsoratra tiako halaina tahaka.' Hoy ny olona sasany manasongadina lahatsoratra fa tsy nifidy , fa satria ny select dia ny teny 'mety', izany no hampiasainay amin'ity lahatsoratra ity.
Raha handika lahatsoratra dia kitiho indroa ny iray amin'ireo teny tianao halaina sy apetaka. Izany no mifidy izany teny izany sy ny menio kely dia hiseho miaraka amin'ny safidy ho an'ny Cut, Copy, Paste, ary maro hafa. Raha te hanasongadina mihoatra ny teny iray monja ianao dia tariho ny faribolana kely amin'ny faran'ny lahatsoratra naseho. Raha vantany vao nifidy ny lahatsoratra tianao halaina ianao dia kitiho dika mitovy .
Rehefa vonona ny hametaka ianao dia kitiho ao anaty boaty an-tsoratra izay tianao hametahana ny lahatsoratra nalaina tahaka (Hampiasa ny fampiharana Notes aho hampisehoana). Rehefa tapanao ny sahan-tsoratra dia ho hitanao ny safidy Mametaka ary mety miankina bebe kokoa amin'ny fampiharana ampiasainao. paompy Mametaka , ary ny lahatsoratra nataonao kopia dia hiseho eo amin'ny sehatry ny lahatsoratra.
inona no dikan'ny isa 6 amin'ny lafiny ara-panahy?
Soso-kevitra: Mety hanampy ny famindrana ny kursor amin'ny toerana tianao hametahana ilay lahatsoratra alohan'ny manandrana mametaka azy ianao. Ity dingana ity dia izao: afindra amin'ny toerana itiavanao azy ny tabilao, kitiho ny bokotra, ary avy eo paompy Mametaka .
Ahoana no fomba hamindrako ilay mpamily amin'ny iPhone?
Raha te-hamindra ny cursor amin'ny iPhone dia ampiasao ny rantsan-tànanao hanindry sy hihazona ny efijery, eo amin'ny toerana tianao tianao haleha. Fitaovana fanamafisam-peo kely no hiseho izay manamora anao ny fitarihana ny cursor amin'izay itiavanao azy. Rehefa eo amin'ny toerana mety dia avelao.
Ahoana ny fomba handikana sy hametahana URL amin'ny iPhone
Ny adiresy tranokala dia matetika lava ary mety ho sarotra ny mitadidy, noho izany ny fahalalana ny fandikana sy ny fametahana ny URL dia hamonjy fotoana be dia be rehefa te hizara tranokala amin'ny namanao na olona iray ao amin'ny fianakavianao ianao.
Raha maka tahaka sy mametaka URL amin'ny iPhoneo dia atombohy amin'ny fanokafana ny app Safari na ny fampiharana browser Internet tianao. Ao amin'ny boaty URL eo an-tampon'ny fampisehoana iPhone, kitiho ny adiresy tranokala hanasongadinana azy. Avy eo, kitiho indray izany mba hamoahana ny safidy hanapaka, handika, na hametaka ary paompy Kopia.
ny fomba fanoratana extensions amin'ny iphone
Rehefa vonona ny hametaka ianao dia kitiho ny sahan-dahatsoratra tianao hametahana ny URL (Hampiasa ny fampiharana Messages aho mba hampisehoana). paompy Mametaka rehefa miseho eo amin'ny efijeryo ny safidy mba apetaho ny URL.
Ahoana ny fomba handikana sy hametahana hafatra ao amin'ny App Messages
Miaraka amin'ny iOS 10, azonao atao ihany koa ny mandika iMessages sy hafatra an-tsoratra azonao amin'ny app Messages. Voalohany, tsindrio ary tazomy ilay hafatra tianao halaina tahaka. Aorian'ny iray na roa segondra dia hiseho eo amin'ny efijery an'ny iPhone ny lisitry ny fanehoan-kevitra (fampiasa iOS 10 vaovao) ary koa ny safidy handika ilay hafatra.
Raha handika ny iMessage na hafatra an-tsoratra dia tsindrio Kopia. Raha hametaka ny hafatra nosoratanao dia kitiho ny tsanganana amin'ny soratra. paompy Mametaka rehefa mipoitra tampoka eo amin'ny efijery an'ny iPhone ny safidy.
tsipika marindrano eo amin'ny efijery finday
Ianao dia manam-pahaizana manao kopia sy mametaka!
Manam-pahaizana amin'ny fomba ofisialy amin'ny fakana tahaka sy ny fametrahana eo amin'ny iPhone-nao ianao! Hamarino tsara fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny namanao sy ny fianakavianao izy ireo hahafahan'izy ireo mianatra mandika sy mametaka amin'ny iPhone! Misaotra anao tamin'ny famakiana ity lahatsoratra ity, ary aza misalasala mamela anao haneho hevitra eto ambany raha manana fanontaniana hafa momba ny fanoratana amin'ny iPhone ianao.